အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
Posted by kai on Oct 11, 2014 in Editor's Choice, Myanmar Gazette, World News | 26 comments
Russell Berman Oct62014, 10:14 AM ET
Never seen in Hong Kong history.
STUDENTS POWER …
Occupy Hong Kong day four: volunteers keeping protest clean and safe
The demonstrators have been delivering supplies back and forth between the different protest camps since Sunday night using trucks, vans and motorbikes. Volunteers offer food, water, first aid, recycling, andagarbage service.
လန်ဒန်မှာ ဆိုလား မသိ၊
ကိုယ့် ကိုယ်တိုင် နဲ့ ပြန် လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုလာ ဘာ လားးး
ကိုယ့် ဘဝ ကိုယ် သဘောကို ဆောင်
သတင်း လေးခု တင်တယ်
သူတို့ကိုယ်နှိုက်က လူအခွင့်ရေးဆိုတာ ဘာလဲတောင်သေချာသိရဲ့လား ပြန်မေးရမယ်။
Balance လုပ်ဖို့ အင်မတန် ခက်တာ ကို ရအောင်လုပ်ပြသွားတာ။
ဘယ်လောက်တောင် လေ့ကျင့်ယူထားရလဲ မသိ။
ကြည့်ရင်း အသက်တောင် မရှူရဲ။
အဆုံးက လှ လိုက်တာ။
ဒီလောက် ပေါ့တဲ့ ငှက်တောင်လေးရဲ့ အားကလဲ Balance လုပ်ထားနိုင်တာနော်။
အပြင်မှာ မမြင်ရဘဲ ဗီဒီယို ဖြစ်နေကထဲ က ယုံဘူး။
မယုံလို့ အင်တာနက် ကို ဖွ လိုက်တော့ ဂလို ပါဘဲ။
လုပ်စားကြီး အင်ကြီး တဲ့။
This is one of his world famous magic, you might have seen it several times! Still you don’t know how he did it!?
A sunny day Criss Angel demonstrates to some bystanders pull apartacouple by their torsos and switch their bodies up.
Indeedavery good idea, but he and his troupe failed to avoid certain errors!!
– Any magic has it’s explanation too!
Scroll down to see the mistakes and how he did it!
– This was not done in real time!
– The video hasaduration of3minutes 25 seconds.
– But in-fact, they took different (takes) hours to compose this video!
– It’s all togetheravery tricky video editing!
– All those who present in this video are all part of the game!
– Criss uses four different persons to do this magic!
. Two of them, (in real life), are without their lower limbs!
. Other two persons with normal lower limbs, very similar or twins of the above ones!
. Two pairs of fake lower limbs are used!
Now let’s havealook at different scenes!
သင်္ကန်းဝတ်တယောက်.. ရေပေါ်ပေါ်ပြတာနဲ့တင်..ထိုင်ကန်တော့ကိုးကွယ်တဲ့…မြန်မာပြည်မှာ.. အဲလိုလုပ်ပြလိုက်လို့ကတော့..
လျို့ဝှက်​ချက်​ က ဗီဒီယို Editing တဲ့။ :))
​ကျေးဇူးအရီး တကယ်​မဟုတ်​ဘူးဆိုတာကို​တော့သိတယ်​။ ဘယ်​လိုလှည့်​စားထားသလဲကိုမသိတာ။ သူက ကဒ်​ဆွဲခိုင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာ ပြန်​ရှင်းပြထားတယ်​ သူဘယ်​လိုကြိုတင်​စီစဉ်​ထားတယ်​ဆိုတာ။
ဟုတ်ပ.. တချို့မျက်လှည့်တွေက.. Live လုပ်ပြတာ..။
အပေါ်ခန္ဓာဖြတ်တာကိုလည်း.. Live လူတွေရှေ့လုပ်ပြဖူးတယ်တဲ့..
၂ယောက်ပြန်ဆက်တော့မဟုတ်.. တယောက်ထဲကို…ဖြတ်ပြီး.. .ပြန်ဆက်တာ…။
နောက်မှသိတာက.. ခန္ဓာအောက်ပိုင်းမပါတဲ့သူရယ်.. ခန္ဓာပျော့လို့.. ခေါင်းကို ပေါင်ကြားမှာလိမ်ပြီးညှပ်လို့ရတဲ့သူရယ်.. ၂ယောက်သုံးသွားတာဆိုတာပဲ..။
Monday, October 13, 2014, 10:27 am
Ebola’s ominous math: Half of Africa’s 1.1 billion people could die by August
Africa has total population of 1.1 billion people. At the infection rate cited by the CDC, by August 2015, most of these people could have been exposed to Ebola, and some 550 million could be dead.
The CDC issued this dire warning at the top of its web page on Ebola: “If conditions remain unchanged, the situation will rapidly become much worse.”
10. Ebola Can Be Spread By Mammals
9. Ebola Is A Sexually Transmitted Disease
8. The U.S. Has Issued Travels Warnings For Sierra Leone, Liberia and Guinea
7. Most U.S. Entry Points Do Not Screen For Ebola Cases
6. An RNA Virus Causes Ebola
5. Early Symptoms of Ebola Are Similar To Other Viral Symptoms
4. Ebola Patients Suffer From Bleeding In the Later Stages
3. Ebola Is Fatal
2. Ebola Medications Are Currently Being Developed
1. The General Public of the U.S. Not At Risk
ဝါကျွတ်မှာ လက်ထပ်မယ်ဆို ဒီလို မိန်းမမျိုးတွေတော့ ရှောင်ကြဗျို့…
အာ့ကြောင့် မိန်းမ မ ယူချင်တာပေါ့။
ခုတော့ ယောက်ခမွ စည်းရုံးနည်းကို ဖတ်မိပြီး သဘောကျလို့။
လောကမှာ ယောက္ခထီးနဲ့ ချွေးမ မပြေလည်တာထက် ယောက္ခမ နဲ့ ချွေးမ မပြေလည်တာကပိုများတတ်ပါတယ်။အဓိက လူတွေမှာလိုအပ်တာက အပြောချိုသာမှုပါပဲ။ အပြောချိုရင် အရာအားလုံးမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ထက် ပြေလည်ကြတာက ပိုများပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်နဲ့ ယောက္ခမက အတူတူ နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မပြေလည်ကြရင် ကိုယ့်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရော ကိုယ်ရော စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ပြေလည်တာကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေ့ါလေ။ ဒီတော့ ဘာလိုစကားတွေကို အဓိကထားပြောရမလဲ ……..
၁) ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် နုပျိုလန်းဆန်းနေတာပဲ။
ဒီစကားတစ်ခွန်းက တကယ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုပြောပြော အပြောခံရတဲ့သူတွေက ကျေနပ် သဘောကျကြပါတယ်။ ယောကျာ်းပြောပြော မိန်းမပြောပြော အားလုံးကကြိုက်ကြပေမဲ့၊ ကိုယ့်ယောက္ခမဖြစ်သူ ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြီးအကဲမပိုဖို့လိုပါတယ် ။ သူကဒီလိုက သက်သက်လာမြှောက်တယ်မထင်ရအောင် ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ။ ။ အမေရယ် အမေ့ကိုဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် လန်းဆန်းနေတာပဲ။ ခုနေသမီးနဲ့သွားရင် သမီးကတောင်အိုတဲ့ရုပ်ထွက်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် စိတ်ပျက်ပါတယ် ဆိုတာမျိုးလေးပေ့ါ ။
၂) အမေ့လက်ရာက အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ ။
ဒီစကားကတော့ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မိလို့ သူ့ကိုဒီစကားလေးပြောပြီး ချီးကျူးပေးရင် သူလည်းသဘောကျပြီး နောက်ကိုကိုယ်လာရင်တောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပိုထည့်ပေးဖို့ ၀န်လေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး သူများအိမ်မှာ ဧည့်သည်သွားလုပ်ရင်လဲ အမလက်ရာလေးက ကောင်းလိုက်တာ ၊ ထမင်းဆိုင်ထက်တောင်သာတယ်ဆိုတာမျိုးလေး ချီးကျူးလိုက်ရင် ဘယ်သူမဆို ပီတိဖြစ်မှာပါပဲ။ ယောက္ခမ အိမ်ရောက်လို့ သူချက်ပေးတဲ့ဟင်းစားရင် ဘယ်လောက်ပဲအရသာ မကောင်းမကောင်း အမှုအရာမပျက်ပဲ ဒါလေးက ဘယ်လိုချက်ထားတာလဲ အရမ်းစားကောင်းလို့ အမေ့ဆီက လာသင်ရဦးမယ်ဆိုတာမျိုး။
၃) ဘာပဲဝတ်ဝတ် ကြည့်ကောင်းနေတာပဲ။
ဒီစကားကိုတော့ ယောက္ခမ အင်္ကျီအသစ်ဝတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မသိလိုက် မသိဖါသာ မနေပဲ အမေရယ် ဘာပဲဝတ်ဝတ်ကြည့်ကောင်းလိုက်တာ သမီးတို့များ အ၀တ်စားတစ်ခါရွေးရင် ပိန်အောင် ၊ ကြည့်ကောင်းအောင် မနညးရှာဝတ်ရတာ အမေတို့ကြတော့ ကံကောင်းလိုက်တာ ဘာဝတ်ဝတ် လှနေတော့တာပဲ ဆိုတာမျိုးလေး ။
၄) အမေ့မြေးတွေက သူ့အဘွားကိုပဲ တစ်ချိန်လုံးတနေတာ။
ပိတ်ရက်တွေ ယောက္ခမ အိမ်ကလေးခေါ်မသွားမိတာ ကြာလာပြီဆိုရင် ယောက္ခမကတော့ ကျိန်းသေနှာကစ်နေပါပြီ။ အဲလိုအချိန်မျိုးတွေဆို အိမ်အ၀၀င်တာနဲ့ အထုတ်မချခင် အမေရယ် အမေ့မြေးတွေက ဘွားဘွားကြီးဆီသွားမယ်ဆိုပြီး တစ်ချိန်လုံး ဂျီကျနေတာ သူ့အိမ်စာတွေနဲ့ စာမပြီးမှာစိုးလို့ ခုမှ အမေ့ဆီကို လာရတော့တယ်။ သားတို့နော် နောက်ကို စာကောင်းကောင်းလုပ် ၊ စာတွေပြီးရင် ဘွားဘွားကြီးဆီကို မေမေ အပတ်တိုင်းပို့ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးလေး ပြောလိုက်တော့ ယောက္ခမကြီးလည်း နှာကစ်ပြေသွားတာပေ့ါနော်။
၅) အမေပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲ။
ဒီစကားကိုတော့ ယောက္ခမ ဘာပဲပြောပြော တစ်ခုခု ထင်မြင်ချက်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကမကျေမနပ်ဖြစ်နေရင်တောင် အရင်ဦးဆုံး တုန့်ပြန်တာမျိုးမလုပ်ပဲ ။ အမေပြောတော့လည်း ဟုတ်နေတာပဲ သမီးတောင်မတွေးမိလိုက်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ သမီးကတော့ ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ် အမေလည်းဝိုင်းအကြံပေးပါဦးဆိုပြီး နောက်ဆက်တွဲစကားကို ပြီးမှဖြည့်ပြောပေးပါ။
၆) အရမ်းဝယ်တတ်တာပဲ ။
ဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့ ယောက္ခမဖြစ်သူကို သူဘာလေးပဲဝယ်လာဝယ်လာ ချီးကျူးစကားပြောပေးပါ။ ဥပမာ ။ ။ ဟင်းရွက်လေးဝယ်လာရင်တောင် အမေ၀ယ်တာလေးက လတ်လိုက်တာ သမီးဝယ်ရင် ဘယ်တော့မှ အမေ့လို ကောင်းကောင်းကန်းကန်းမရတတ်ဘူး။ အမေ၀ယ်ရင်ကို ဈေးသည်တွေက ပိုပေးချင်နေတော့တာလားမသိဘူး ။ ဆိုတော့ သူလည်းသဘောကျ ကိုယ်လည်းဈေးဝယ်ရသက်သာသွားနိုင်တာပေ့ါ။
Credit to မနုဿ
အဖေရောဦးလေးရောက ငါးသိုင်းချောင်းဇာတိ။ ဦးလေးက စကားပြောတာက လိုတိုရှင်းနဲ့ ပြတ်တယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်ရနေတာက တခါက မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌကြီးဦနေ၀င်းက သူ့ကိုခေါ်ပြီးလေးဆူဓာတ်ပုံမြတ်ရွှေဂုံကနေ လေးဆူဓာတ်ပုံကိုတူးရင် မကောင်းလားလို့ အကြံဥာဏ်တောင်းတယ်။ သိတဲ့အတုိင်းအဲ့ဒီ့ခေတ်ကာလက ဥက္ကဌကြီးရဲ့စကားကို ဆန့်ကျင်ရဲသူဝန်ထမ်းကရှားတယ်။ ဦးလေးက ဘာပြန်ပြောသလဲဆို ” ဥက္ကဌကြီးရာ။ တူးတာကလွယ်ပါတယ်။ တူးလိုက်လို့ တွေ့ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့။ မတွေ့ရင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ယုံကြည်လာတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်နားသွားထားမလဲ” လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက မင်းမိန့်အရဆိုပေမယ့် မလုပ်သင့်တာကို သူဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။
နိုဝင်ဘာလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် “ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အေးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း” မှ….
Myanmar Gazette Oct Nov 2014 #71 by Myanmar Gazette
perfect body ဆိုပြီးလုပ်လို့ ဆန္ဒပြနေကြတယ်.. တဲ့..
Victoria’s Secret ‘Perfect Body’ campaign sparks outrage
But with the words “The Perfect Body” splashed across the ad, the controversial campaign …
30 October 2014 20:02(+0630) (လွန်ခဲ့သော7နာရီ ခန့်က)
သမ္မတအိမ်တော် တွေ့ဆုံပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မယ်လို့ ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က အတည်ပြု ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူး ပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ် ညင်သာခိုင်မာစွာ ကူးပြောင်း နိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့ သမ္မတက ဖိတ်ကြား ထားတဲ့ အပေါ် ဦးဝင်းထိန်က အခုလို ပြောဆို လိုက်တာပါ။
ဆက်ပြီး လေး အောင် ၁၄ ဆောင် တဲ့။
ဆက်ပြီး တစ် အောင် ၃၁ တဲ့။
ဒီလူ အရေအတွက် ရ အောင် လူတွေ ထိုးထည့်လိုက်ရတာ။
ဒီ ရက်လေးကို ရအောင် မနည်း တွက် လိုက်ရတာ။
အကျီ အရောင် ပုဆိုး အဆင်။ လာမယ်။ ကြည့်ထား။
အကောင်းမြင်နေမိလွန်လွန်းလို့ ပိုကောင်းအောင်မြင် ကြည့်တာ။
(အဟတ် အဟတ် အဟတ်)
All the best Daw Aung San Su Kyi.
သူကြီး ရဲ့ ဒီမှတ်ချက် က တစ် ငါးလုံး ပူး ကြီး နဲ့ မှတ်ချက် ဗျို့။ (11111)
ဘယ်လို နမိတ်ကောက် ရမလဲ စဉ်းစား ကြပါ။
နိုင်ငံရေးသဘောတရားအရ.. သမ္မတဘုရ်ှကြောင့်.. ယူအက်စ်စီးပွားရေးကျဆင်းပြီး.. စစ်ကြီး၂ခုဆင်နွှဲ.. ငွေတွေ ထရီလီယန်( ဒေါ်လာဘီလီယန် ၁၀၀၀ = ၁ ထရီလီယန်) ကုန်တာတောင်… ဥပဒေအရ.. သမ္မတဘုရ်ှကို.. ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိခဲ့ပါ..။
အဲဒီသဘောထားနဲ့ တန်းတူထားမယ်ဆိုပြီး.. မြန်မာပြည်လည်း.. ရင်ကြားစေ့ရေးဦးတည်သင့်လှတယ်ထင်မိတယ်..။
တောင်းပန်ခွင့်လွှတ်တို့ရဲ့.. သဘော… အင်မတန်.. အရေးကြီးကြောင်း…။
အောက်တိုဘာ ၂၅ ။
မြန်မာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းမှာ
လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကို မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်”လို့ UNDO အဖွဲ့က ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
NLD ပါတီ ပြင်ပရောက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNDO က
ရန်ကုန်မြို့ ယုဒသန် ခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်နယ် ၊ တိုင်းလေးခုရဲ့ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားမှာ ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နဝတ)၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) အစိုးရများရဲ့
လူ့အခွင့်ရေးချိုး ဖောက်ခံရမှုများကို စုံစမ်းဖို့ စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စိစစ်ချက်ကို မှတ်တမ်းပြုစုပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သိသင့်သိထိုက်သူတွေအားလုံးကို တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း UNDO အဖွဲ့ရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့် က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ ”စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်း”အဖြစ် ထားရှိမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အတွက်လည်း လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု ဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အဆိုပါ ကော်မတီကို ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ အပါအဝင် ၊တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သခင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၊ ၁၉၆၂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ၊ ကျွန်းပြန်နိုင်ငံ ရေးသမားတွေနဲ့ အလုပ်သမား အရေးအခင်းခေါင်းဆောင်များ၊ မှိုင်းရာပြည့်ခေါင်းဆောင်များ၊ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ၊ ကျွန်းဆွယ်အရေးအခင်းခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးသန့်အရေးအခင်းခေါင်းဆောင်များ၊ ၁၉၉၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့
အခြား ပါဝင်သင့်သူတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။